Article | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
July 4, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း
JAKARTA,4July 2016 — Two recent attacks on mosques in Myanmar have again raised questions about the commitment of the Myanmar government to tackle rising anti-Muslim sentiment and the hate speech that fans it, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) said today. . The collective of regional lawmakers called on authorities in Myanmar
June 22, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြတ်သားဆုံး ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီရေးသို့ အသွင်းကူးပြောင်းနေပြီ ဟူ၍ လူထုအတော်များများက ထင်မှတ်မှားနေကြချိန် ဤနှစ် ဤလအတွင်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အခိုင်အမာရှိနေသေးကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓက တခုကို အမှတ်မထင် တွေ့ မြင်လိုက်ကြရသည်။ ယင်းမှာ သီပေါ စော်ဘွားစ၀်ကြာဆိုင် ၏ ကြေကွဲဘွယ် ဘ၀အတ္တုပ္ပတ္တိအား ရိုက်ကူးထားသည့် Twilight Over Burma ရုပ်ရှင်ပြခွင့်အား ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦး နှင့် စ၀်ကြာဆိုင် တို့ နှစ်ဦး၏ ဘ၀ကိုနိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် တူညီသော အချက်များ အတော်များများ
June 19, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း
The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, will undertake an official visit to the country from 20 June to 1st July 2016. This visit takes place atakey juncture for Myanmar withanew Government in place since April following last year’s historic elections.
June 19, 2016 ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း
မြန်မာတွင် ဆိုရိုးစကား နှစ်ခုရှိသည်။ တခုမှာ “မြှော်လင့်တုံး ကျော့ဆုံးလာချေပြီ။” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မိမိမြှော်လင့်စောင့်စားနေသော ချစ်သူ ရောက်ရှိလာပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြှော်လင့်သည့် အတိုင်းဖြစ်လာပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း ၀မ်းမြောက်စွာရည်ညွှန်းသည့် သဘောကို ဆိုလိုသည်။ အခြားတခုမှာ “တိမ်ကြားမင်းခေါင် က ငှက်ပျောတောထဲက ထွက်လာတယ်။” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးမည့် မင်းလောင်းသည် ကောင်းကင်မှနေ၍ တိမ်ကိုစီးကာ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ပြည်သူလူထုကမြှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့ တွင်မူမင်းလောင်းသည်မြေပြင် ငှက်ပျောတော ထဲမှနေကာ လေးဘက်ထောက်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ပျက်မှုကို ဖေါ်ကျူးသည့် သဘောဆောင်သည်။ . ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည် “မြှော်လင့်တုံး ကျော့ဆုံးလာခြင်း” ဖြစ်သလား၊ “တိမ်ကြားမင်းခေါင်” ဇာတ်ခင်း နေခြင်း ဖြစ်သလားဟူသည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ရှုဒေါင့်မှ
June 12, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်
Sumeet Grover – TRANSCEND Media Service Recently an article appeared on the Guardian UK whereaformer Christian,aJew andaMuslim wrote about quitting religion because they realised they were made to cultivate false beliefs about themselves and others. My story is about quitting the largest Buddhist organisation in the UK